Dianabol: Otu esi ewere ya? Nso idi utịp? [Mụta EZIOKWU EBE A!]
Cellulite: Nduzi zuru ezu iji nweta ego na otu esi eme ya!
Vitamin C: Gịnị ka ọ bụ maka? Olee uru ọ bara? Lelee!
A makwaara dị ka DBol, Dianabol bụ steroid nke emere na United States na ntinye ihe dị iche na ọtụtụ ndị steroid: kama iji ya eme ihe site na injections, a na-eme ya site na ọgwụ ndị eji ọnụ ekwu. Na mgbakwunye, ọ na-ekwe nkwa nnukwu uru na ike na akwara.
Isiokwu a ga-ekwu ntakịrị ihe banyere njirimara nke steroid a, mana ọ dị mkpa ịdọ aka na ntị na ojiji nke steroid ndị anabolic nwere ike ibute ihe egwu ahụike, mana iji ya n'ụzọ ziri ezi, na nlekọta ahụike na nlekọta dị mkpa, ha nwere ike iweta ọtụtụ uru . Chọrọ ịmatakwu? Ya mere, gaa n'ihu na-agụ isiokwu a!
Akụkọ banyere Dianabol landerlan
Dianabol ịzụta , ma ọ bụ kama, methandrostenolone, amaara nke ọma na ụwa nke ndị na-eme egwuregwu na bodybuilders maka imepụta dịka otu n'ime ihe ndị mbụ sitere na testosterone. Mgbe ọ nwụsịrị, ọtụtụ ụdị ndị ọzọ pụtara n'ahịa ahụ iji gbalịa ijide otu akụkụ nke niche ọ ghọtara na ọ chọtara n'iji steroid a.
Ebu ụzọ mee ya na 1960, n'oge na-adịghịkwa anya, ọ ghọrọ onye na-ahụkarị steroid na ụdị egwuregwu asọmpi niile. Nke a bụ n'ihi ịdị mfe nke ojiji ya, yana arụmọrụ nke nsonaazụ ya.
Dr. John Bosley Ziegler bụ onye nkesa izizi nke Ọnụ Dianabol (methandrostenolone) maka ndị egwuregwu Olimpik US. Mgbe ha jisịrị ihe ahụ mee ihe, ndị na-eme egwuregwu na-eme nke ọma karị ma si otú a, uru ya doro anya.
Mmepụta Dianabol dị na US gbawara ruo oge ụfọdụ wee belata oke oriri ya. Na ngwụsị 80s ewepụrụ ngwaahịa ahụ n'ahịa, agbanyeghị, ọ tufuoghị ewu ewu ya, ọ ka na-ere ahịa steroid kacha mma na ahịa ojii.
Kedu ihe bụ Dianabol? Gịnị ka ọ bụ maka?
Emebeghị Dianabol n'okpuru aha ahụ kemgbe afọ 1970. Taa, a na-ahụ ngwaahịa dị ka Anabol ma ọ bụ Andoredan.
Ihe na-arụ ọrụ nke ihe a bụ methandrostenolone, nke bodybuilders na bodybuiders ji. Na mgbakwunye na ịba ụba ahụ ike, Dianabol amarawo n'ụwa niile dịka otu n'ime steroid kachasị amasị Arnold Schwarzenegger.
N'etiti ọdịiche dị iche iche nke mere Dianabol ji bụrụ onye ama ama na 1970s, ga-abụ ụzọ iji ya, ebe ọ bụ ihe mbụ na mkpụrụ ọgwụ.
Ọ dịkwaghị mkpa iji ọgwụ injectable na-egbu mgbu iji nweta ahụ ike, naanị ịtinye ọgwụ na presto, nsonaazụ ya dị ịtụnanya.
A na-ahụta ya dị ka steroid dị ike, na-ejikarị emeziwanye arụmọrụ na arụmọrụ nke anụ ahụ, na-eme ka uru ahụ zaa aza.
[junkie-tabs] [junkie-tab title = ”MARTA OZI IJI INWETA MUSCLE MASS IN A SITE TIME”] Giga Buy Giants Formula Ugbu a wee nweta ego dị ịtụnanya isChọta otu esi agbanwe ahụ gị ma mụta otu esi eji steroid n'enweghị nsogbu ✅ Pịa ebe a ma buru nke gi ugbua! [/ junkie-tab] [/ junkie-tabs]
Aha Molekul: [17a-methyl-17b-hydroxy-1,4-androstadien-3-otu]
Molekụla ibu: 300.44
Isi okwu: N / A
Onye mmeputa: Ciba (Na mbụ)
Creationbọchị okike ọchịchị: 1956
Irè dose: 25-50mgs (a na-akọ doses n'okpuru 5mg na n'elu 100mg)
Ọkara ndụ: 6-8 awa n'ụdị ọnụ. Na n'etiti oge 48-72 na ụdị injectable.
Oge nchọpụta n'ime ahụ: Ukwuu karịa izu isii
Anabolic / Androgenic Index (Mgbanwe): 90-210: 40-60
Na-atụgharị na DHT: Emela
Ihe otutu: Ee
Idebe mmiri: Ee
Nnukwu nrụgide: Ee
Esi ewe Dianabol?
Dị ka steroid ndị ọzọ, a na-eji Dianabol mee ihe na cycles, ya bụ, oge a kara aka, na-abụkarị izu isii. Otú ọ dị, ntụgharị ya na-enye ya ohere iji ya mee ihe n'ụzọ dị iche iche:
Nke mbu bu igbanye uru di iche-iche na mmelite na oru, na obere ogwu kwa ubochi.
Secondzọ nke abụọ bụ n'etiti cycles nke steroid ndị ọzọ, nke mere na nsonaazụ sitere na ngwaahịa ọzọ anaghị efu, na obere ọgwụ, yana TPC.
A naghị atụ aro Dianabol, ọbụlagodi obere ogwu, maka ụmụ nwanyị.
Dianabol bụ nnukwu ọrụ nwekwuo ike nke ndị ọrụ gị, na-arụpụta ọzụzụ n'ụzọ ka ukwuu.
Nnukwu enyemaka maka ụlọ anụ ahụ, ọ na - ebute njigide nitrogen ka ukwuu - njirimara metụtara hypertrophy, na na-eme ka mọzụlụ zuo ezu, ọ bụ ezie na nke a bụ ihe efu nke njigide mmiri ma na-emebi nkọwa muscle.
Oriri nwekwara mgbochi catabolic edinam, iweda ogo cortisol site na 70% na igbochi ahụ site na ịmepụta mkpụrụ ndụ akwara maka ike wee si otú a mee ka onye na-eme egwuregwu tufuo uru ahụ.
TPC - Usoro ọgwụgwọ usoro gịnị ka ọ bụ?
Maka ndị na-amaghị, usoro ọgwụgwọ na-aga n'ihu bụ banyere iji ọgwụ ọjọọ eme ihe iji belata ma ọ bụ kwụsị mmetụta ọjọọ nke steroid nke anabolic ga-eweta n'ahụ gị. Ọ ga-ahụ na ị ga-anọgide na-enwe ahụike ma ghara ida uru uru.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, TPC bụ oge ahụ gị ga-agbake tupu a na-ewere ọtụtụ ọgwụ ndị na-arịa ọrịa anabolic, nke mere na a ga-echekwa uru nke ihe ahụ.
N'ezie, TPC na-arụ ọrụ kachasị mkpa iji belata mmetụta na-adịghị mma nke ndị na-arịa ọrịa anabolic, na-eme ka ahụ kwadebe onwe ya iji nweta ọtụtụ ihe ahụ, belata mmetụta na-adịghị mma nke enwere ike ịkpata.
Iji mee CPT, ọ dị mma ka ịtọlite ​​tebụl mgbake, nke gụnyere itinye "ndị nchebe" maka izu isii.
Chọrọ ịmata ihe niile gbasara TPC? PỊA EBE A!
Dianabol Ọ Na-eme Ka Ọ Dị Ike?
Ee Dianabol bụ ihe na - eme ka akwara too ngwa ngwa, nke bụ ebum n’uche ya.
Ọzọkwa, ihe a nwere ike inye ọtụtụ uru ndị ọzọ dị ka: Nkọwa dị elu nke akwara, ike na-arịwanye elu, caloric ọnwụ, mbelata abụba a na-ahụkarị, n'etiti ndị ọzọ.
Kedu ụdị usoro ọgwụgwọ dị mma?
Idealdị usoro ọgwụgwọ dị mma nwere ike ịdị iche site na mba na onye mepụtara ya. Ihe niile dabere na ebumnuche nke onye ọ bụla, yana otu esi etinye ihe ahụ. Otú ọ dị, ụkpụrụ nduzi mbụ edepụtara na-atụ aro usoro ọgwụgwọ nke 3 ka 6 nke 5mg, ma ọ bụ 15 ka 30mg kwa ụbọchị.
Ma ọbụlagodi na nsonaazụ nke obere usoro a nwere ike iweta na ahụ, na-arụ ọrụ nke ọma iji melite arụmọrụ, ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-ebu nnukwu ibu.
Ọ bara uru na-echeta na ịbawanye usoro onunu ogwu nwere ike ịbawanye nsonaazụ.
Ndi Dianabol Nwere Mmetụta?
Dị ka ọ bụla steroid nke anabolic, ọ bụrụ na ejighị ya nke ọma na nlekọta ọkachamara, ha nwere ike ibute mmeghachi omume siri ike. O doro anya na ị nụla ụdị ikpe a.
Ya mere, tupu ịmalite iwere ya, ọ dị mkpa ka ị mara ihe ọghọm dị na ya. Anyị depụtara ihe ndị kachasịkarị n'okpuru:
Oke egbu egbu na imeju
akpata ọbara mgbali
Na-akpata njide mmiri
Mee ka mmanụ dịkwuo elu na anụ ahụ, na-akpata ihe otutu na isi ojii
Uto nke ntutu ihu na nke ahụ
Nnukwu mammary glands (Gnwewe)
Mkpokọta abụba ìgwè
ọgbụgbọ na ọgbụgbọ
Mmehie nke ịhụ nsọ
agwa ime ihe ike
A ka na-emeputa ya?
Dịka anyị kwurula, Dianabol kwụsịrị imepụta ụwa niile na 80 ma ọ gaghị enwe ike ịchọta ya n'okpuru aha a.
Otú ọ dị, a pụrụ ịchọta ngwaahịa ndị yiri ya sitere na steroid a n'ahịa n'okpuru aha dị iche iche: Anabol e Andoredan bụ ihe atụ abụọ.
Enwere ike ịchọta ya na mbadamba na ụdị injectable.
Iankpụrụ Giants- Otu esi eto eto!
A eke ozo ka i merie a ibu ahu, na oru oma uru uru, bu mmemme Iankpụrụ Giants.
Ihe omume a bu Ricardo de Oliveira, onye nkuzi nkuzi banyere mmega ahụ, onye na-enye ndụmọdụ banyere nri na ịkpụ ahụ ọtụtụ mmadụ ugbu a na Brazil na mba ofesi tụpụtara mmemme a.
N’iche echiche idozi obi abụọ nke ọtụtụ mmadụ banyere ịba ụba akwara, Ricardo hụrụ na iankpụrụ Giants ahụ ohere iji nyere ndị mmadụ aka ịchọpụta ezigbo ihe nzuzo nke ndị mgbatị ahụ. Gịnị ka ọ na-eri? Kedu ihe ha na-eji? Olee otu ha si azụ?
Emepụtara usoro ndị Refeyim n'ụzọ bụ isi ka ndị mmadụ wee mụta ngwa ngwa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'enweghị nsogbu, otu esi eme ka akwara dịkwuo elu, site na iji ọgwụ ndị anabolic.
Gkpụrụ ndị Giants bụ mmemme nke Ricardo Oliveira tụụrụ, onye gụsịrị akwụkwọ na agụmakwụkwọ ahụ, na-amụ ihe oriri ugbu a ma na-enye ndụmọdụ maka ọtụtụ puku mmadụ niile na Brazil chọrọ ịba ụba akwara, n'ụzọ doro anya na ngwa ngwa, site na iji ọgwụ ndị anabolic , nri dị mma na ọzụzụ a kapịrị ọnụ.
Otu n'ime ajụjụ ndị ụmụ akwụkwọ ya gbara na ndụmọdụ bụ etu esi eme 10kg na nke kachasị nke ọnwa 3 wee buru ibu.
Akara ndị Giants ', Ricardo ga - akuzi "Isi" ka ị ga-esi buru nnukwu mmadụ. Iji ndụmọdụ na ozi ịtụnanya ị n’ahụghị ebe ọzọ
Ihe omume a zuru oke, ma o nwere akwukwo dijitalụ isii ebe ị ga-amụta ihe na-arụ ọrụ, ihe ziri ezi, n'ụzọ dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma. Na mgbakwunye na akwụkwọ dijitalụ na ozi niile ịchọrọ, ị nwekwara ikike ịkwado nkwado iji zaa ajụjụ gị niile.
Ebee ka ịzụta Giants Formula?
A na-ere ndị Giants Formula naanị na ebe nrụọrụ weebụ nke ndị na-ere ahịa. Yabụ, site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ndị Refeyim 'Formula.
Zụta mmemme a site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, ị na-ekwe nkwa ịzụta zuru oke, na ọnụ ahịa ọnụahịa, nke dabara na akpa gị, nkwa afọ ojuju nke na-eme ka ịzụta gị zuru oke na-enweghị ihe ọghọm, na mgbakwunye na inweta usoro mmemme mbụ, juputara uru na uru .
Nke ahụ ziri ezi, ịzụ ihe omume gị ma bido ịgbanwe ahụ gị ugbu a dị mfe! Nke mbụ, ị nweta ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, https://formuladosgigantes.com/, kwụọ ụgwọ gị n'ụzọ nchekwa na nzuzo, na presto, ị ga-enweta njikọ iji budata akwụkwọ dijitalụ ma rie elele niile nke mmemme ahụ.
Were uru nke ọnụ ahịa dị oke ọnụ, Akwụkwọ dijitalụ 6 na nkwado elekere 24 maka nkeji 12 nke R $ 9,74 ma ọ bụ R $ 97,00 na ego.
Chọrọ ịma banyere nnukwu akwụkwọ ahụ? PỊA EBE A!
Gịnị ka ị na-amụta?
Usoro ihe omume zuru ezu na e mere nke mere na ị nwere ike nweta ihe ịtụnanya pụta. Lee n'okpuru ihe ị na-amụta na Refeyim 'Formula na ihe ị na-achọghị:
Akaebe nke ndị na-akwado nsonaazụ ahụ
Ndị gbalịrị Mmemme Usoro Giant ahụ kwadoro ma rụpụta ihe ga-esi na ya pụta. N'oge na-adịghị anya, ha hụrụ nsonaazụ ahụ wee mụta otu esi eji ndị steroid eme ihe n'udo, na-agbaso ntuziaka niile.
Lelee ụfọdụ akụkọ sitere n'aka ụfọdụ ndị na-akwado usoro ndị Giants:
Kedu ihe gụnyere na mmemme ahụ?
Enwere akwụkwọ dijitalụ isii ga - enyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ gị ọsọ ọsọ na n'ụzọ doro anya. Akwụkwọ 6 ndị a bụ:
Ebumnuche nke ndị Refeyim: Nwere ihe niile ịchọrọ ịma tupu ịmalite steroid. Ozi banyere mmetụta bara uru ma na-emerụ ahụ, na onwu, mmekọrịta nke organism, n'etiti ndị ọzọ.
Steroid okirikiri: Ihe omuma atu 14 nke usoro eji eme ihe nke gha eme ka igha buru ibu.
Profaịlụ nke steroid: Akwụkwọ a ga-egosi gị steroid ndị kachasị eji eme ihe n'ụwa, ọrụ ha, wdg, yabụ ị nwere ike ịtọ ntọala gị n'ụzọ ziri ezi.
Oriri nke steroid: Ihe nlere anya nke nri ị kwesiri iso, ị gha muta ịgbakọ mkpa gi dika ogugu na ibu gi si di.
Anabolized ọzụzụ: Ihe Nlereanya nke ọzụzụ na-eso maka 5 ụbọchị, nke mere na gị pụta na-maximized.
Ulakpụrụ nke Chi nwanyị: Akwụkwọ ejiri maka ụmụ nwanyị na-ege ntị, yana ndụmọdụ na ozi gbasara nri, ụkọ ọnwụ, uru mmadụ, ihe atụ nke steroid steroid nke ụmụ nwanyị, n'etiti ndị ọzọ.
200 Anabol Recipes: Ezi ntụziaka, anụ, azụ, ọkụkọ, anụ ezi, nri ụtụtụ, nri na ihe ndị ọzọ, ka ị mee ka nri gị sie ike ma mee ka ọ dị ụtọ.
[junkie-tabs] [junkie-tab title = ”MARTA OZI INWETA UMU AKA NA INWETA OGE”] Giga Buy Refeyim Formula Ugbu a wee nweta ego dị ịtụnanya isChọpụta otu esi agbanwe ahụ gị ma mụta otu esi eji steroid eme ihe ọfụma✅Pịa ebe a ma buru nke gi ugbua! [/ junkie-tab] [/ junkie-tabs]
[junkie-alert style = ”red”] Saịtị a bụ maka naanị ebumnuche ozi! Anyị anaghị agba ume ka ị jiri steroid [/ junkie-alert]
Ma ederede ahụ masịrị gị? Ka nwere ajụjụ gbasara Dianabol? Hapụ okwu gị!
esi ewere dianabol
ihe dianabol maka
gịnị bụ dianabol
ihe niile banyere dianabol
dianabol maka ụmụ nwanyị
dianabol ebe ịzụta
tpc maka dianabol
dianabol na testosterone
dianabol landerlan ehi
otu esi ewere dianabol n'enweghị nsogbu
ogwu ogbugba dianabol
dianabol hi na-akọ akụkọ
dianabol 100 ọgwụ
dianabol free ahịa
hi tech na-emepụta ọgwụ dianabol
dianabol 90 okpu
ebe ịzụta dianabol
5mg nke ọgwụ
okirikiri na dianabol
tupu na mgbe dianabol
mmiri mmiri dianabol
dianabol otu esi eji
mbadamba dianabol 10mg
dianabol methandienone mmetụta
dianabol okirikiri maka ndị mbido
dianabol 90 taabụ
acha anụnụ anụnụ dianabol
ụzọ kachasị mma iji were dianabol
dianabol landerlan ọnụahịa
alfa ọgwụ dianabol
otu esi eji dianabol
49 echiche na “Dianabol: Ihe niile gbasara Otu n'ime Anabolics Kacha ewu ewu!"
Ọgọst 1, 2015 na 11:06 am - Dezie
Esi zụta diansbol
Jenụwarị 17, 2017 na 07:30 am - Dezie
Jorge Luiz kwuru
Disemba 1, 2015 na 22:36 am - Dezie
Ndewo ezigbo abalị, enwetụbeghị m steroid nke anabolic na ndụ m, mana enwere m mmasị na dianabol ma zụta ya, mana achọrọ m ịma etu m si eme tpc achọrọ m ime ihe niile ziri ezi iji nweta uru ka mma ma debe ihe m ga-enweta uru ahụ, biko zigara m e-mail gịnị bụ ngwaahịa na otu esi ewe ha mgbe m mechara okirikiri ahụ, abughi m onye mbido na bodybuilding agara m mgbatị ahụ otu afọ na ọkara , Ana m eche azịza gị daalụ.
Carlos Ferreira gulart nwa
Disemba 7, 2015 na 02:29 am - Dezie
Ndewo, kedu ka ị mere. Aga m amalite ị Tụ DIMABOL Ọ ga-amasị m ịmara mkpụrụ ọgwụ ole ị na-a perụ kwa ụbọchị ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume nye m tpc daalụ n'ọdịnihu
March 23, 2017 na 18:15 am - Dezie
Ọ kaara gị mma ịgakwuru dọkịta na-ahụ maka egwuregwu ma ọ bụ ọkachamara na endocrinologist karịa ịchọ mpaghara maka azịza.
Disemba 15, 2015 na 14:50 am - Dezie
Chee ọgwụ a na tpc ihu na iji mee ihe mgbe izu isii gachara ma ọ bụ mgbe ị gachara otu ụbọchị
Jenụwarị 12, 2016 na 03:24 am - Dezie
Organshild Optimal TPC, TPC kwesịrị ime mgbe ị werechara mbadamba niile. Ekwadoro m ị plentyụ nnukwu mmiri na ibelata carbohydrates ma na-erikwu protein.
Febụwarị 17, 2016 na 10: 50 pm - Dezie
Chọrọ ịma ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ịkwụsị ị takingụ ya tupu izu isii agafee?
Julaị 6, 2016 na 21:51 am - Dezie
Gaghị enwe ọ theụ ihe niile DBOL rụpụtara. Agbanyeghị ị kwesịrị ime TPC.
March 13, 2016 na 22:17 am - Dezie
Ndewo ekele maka ozi!
Enwere m 1,78m 75kg ectomorph, akọwapụtara nke ọma ...
Aga m eji Diana, ka m nweta nsonaazụ ka mma na ọ ga-adị mma ịrapara na nri ma gbakwunye na Whey na Bcaa ka ọ bụ na mgbakwunye ga-abụ ego efu n'oge okirikiri ahụ?
Ana m eji ịnụ ọkụ n'obi echere nzaghachi gị .. Mmakọ!
June 8, 2016 na 18:53 pm - Dezie
nwoke, ọ bụrụ na ị ga-aga okirikiri na okirikiri a ma ọ bụ n'agbanyeghị usoro okirikiri ọ bụ, ị ga-etinye ihe mgbakwunye na okirikiri
March 18, 2016 na 04:11 am - Dezie
ezigbo enyi gị Douglas ka ị na-etinye ụfọdụ protein dị ka (whey protein, albumin, carnivore)
ọ ga-abụ ihe ndọpụpụta pụta, na ndị ọzọ okwu, ọ ga-enyere gị nweta ihe muscle ibu abawanye ”!
ebe ahu anyi choro:
Ọgọst 10, 2016 na 18:43 am - Dezie
Na vitamin na mineral, ebee ka ha nọ?
Ebe ọ bụ na ihe niile anyị chọrọ bụ: "Protein, Carbohydrate and Fat".
Ndị enyi, m na-atụ aro ka ị na-echekwu echiche na isi gị na obere na akwara gị!
March 27, 2016 na 11:08 am - Dezie
Anyị ekwesịghị iwere ihe ọ bụla dọkịta na-agaghị agafe. Anyị nwere ike inwe oke nkụchi obi. Inweta na igbu onwe.
March 28, 2016 na 07:00 am - Dezie
M ga-amalite usoro okirikiri m taa, m ga-achọ ịma ma n'oge okirikiri ahụ, m ga-ewere ụfọdụ ọgwụ ma ọ bụ naanị dps ọbụna na tpc?
Julaị 6, 2016 na 21:56 am - Dezie
N'oge ị nwere ike iji silymarin.
Mgbe ahụ TPC CLOMID + TAXIMOPHENE.
N’oge HCG ngwa.
Eprel 24, 2016 na 18: 33 pm - Dezie
Ihe ọ lemonụ lemonụ lemon dị ọcha na-ebelata mmetụta nke dianabol
Eprel 30, 2016 na 15: 39 pm - Dezie
enwere m ike iji dianabol na androgen 300?
Mee 5, 2016 na 16:00 pm - Dezie
N'ehihie, ahụtụbeghị m steroid nke anabolic na ndụ m, mana m nwere mmasị na dianabol na azụrụ m ya, mana achọrọ m ịma etu m si eme tpc Achọrọ m ime ihe niile ziri ezi iji nweta uru ka mma ma debe ya ihe m ga-enweta na akwara, biko zitere m maka ozi-e m bụ ngwaahịa na otu esi ewe ha mgbe m gachara okirikiri, abughi m onye mbido na bodybuilding m na-aga mgbatị ahụ maka a afo na okara, a na m eche azịza gị daalụ.
Ọktọba 25, 2017 na 20: 59 pm - Dezie
Mee 26, 2016 na 07:09 pm - Dezie
Ndewo, kedụ ọgwụ ị ga-eme TPC n'oge Diana okirikiri. Daalụ
Julaị 6, 2016 na 21:53 am - Dezie
June 8, 2016 na 00:20 pm - Dezie
Ndewo m ga-amalite ị takingụ dianabol, mmadụ ole ka m kwesịrị iwepụ ụbọchị ...
Kedu ihe bụ ọgwụ maka Tpc n'oge na mgbe okirikiri ahụ? Ekele!
June 20, 2016 na 09:08 pm - Dezie
Kedu ọgwụ ị na-a ?ụ? mgbe izu isii dianabol gasịrị !!
Ndi TPC KWES +R + + TAXIMOPHENE
Julaị 2, 2016 na 15:04 am - Dezie
Ndewo..m ga acho imata ubochi ole dianabol kwesiri ka m were kwa ubochi ... Enwetụbeghị m ya
Julaị 12, 2016 na 08:08 am - Dezie
Ndewo…. dị mma I .Amasị m ịmata mkpụrụ ọgwụ ole m ga-a perụ kwa ụbọchị nke dianabol na m ga-achọ ịma ụdị ọgwụgwọ m kwesịrị inye mgbe theBỌCH…… Daalụ
Ọgọst 5, 2016 na 00:00 am - Dezie
hello m na-eji dianabol achọrọ m ịmara nkọwa gbasara okirikiri a bụ ihe m kwesịrị ị duringụ n'oge yana mkpụrụ ọgwụ ole m kwesịrị ị perụ kwa ụbọchị biko nyere m aka dịka m na-echegbu onwe m na anaghị m ewere watzap 84992105352
Ọgọst 12, 2016 na 15:56 am - Dezie
Needkwesịrị iji tamoxifen n'oge okirikiri gị ma ọ bụ mgbe ị gachara?
Ọgọst 29, 2016 na 21:18 am - Dezie
Ana m ewere ya, Achọrọ m ịma ụbọchị ole m kwesịrị iwe na okirikiri
September 3, 2016 na 10:39 am - Dezie
Kedu ihe m kwesịrị ịnara mgbe okirikiri gafere?
September 9, 2016 na 11:21 am - Dezie
Anọ m na-aanụ dianabol 10mg otu ụbọchị maka otu ọnwa, Achọrọ m ịma ma m ga - agwụcha ụbọchị 90 ahụ, ka ọ ga - ewute m Q abụ m nwanyị, kedụ ihe Q m kwesịrị iwere mgbe m mechara?….
Ọktọba 17, 2017 na 02: 59 pm - Dezie
Lee anya, ụmụ nwanyị agaghị erichapụ Diana, belụsọ ma ịcheghị mmetụta androgenic.
Ọktọba 8, 2016 na 22: 05 pm - Dezie
Lucélia azụrụ m cirimalon! Kedu otu esi enweta nsonaazụ gị?
Ọktọba 14, 2016 na 16: 36 pm - Dezie
November 13, 2016 na 18:51 am - Dezie
Ysmụ okorobịa, onye ọ bụla nwere ike ịgwa m ma ọ bụrụ na Dbol nwere ike ibute ọrịa anụ ahụ? Amalitere m ịnara ya ma mgbe otu izu gasịrị, ụdị ntutu na-enweghị isi pụtara nke mgbe ụbọchị ise gasịrị kpọgara m na ime ụlọ ọrụ, taa enwere m nnukwu oghere n'ụkwụ m.
November 17, 2016 na 01:07 am - Dezie
Anọ m na okirikiri, ị na-akwado usoro okirikiri?
Kedu ihe m kwesịrị ịme, na otu esi eme ya
November 17, 2016 na 12:44 am - Dezie
Ndewo Ni! Ọ bụrụ na ị ka na-enwe obi abụọ banyere okirikiri, TPC na ụzọ ziri ezi iji mee ka ndị na-arịa ọrịa anabolic, anyị na-atụ aro ka ị mata usoro Giant. Usoro a bụ ezigbo klaasị na isiokwu ndị a. Pịa n'okpuru: http://bit.ly/curso-online-formula-de-gigantes
Jenụwarị 18, 2017 na 20:28 am - Dezie
Kedu ihe bụ ọgwụgwọ TPC kachasị arụ ọrụ nke Diana?
March 17, 2017 na 11:01 am - Dezie
Agaghị m eji TPC ọ bụla, ọgwụ ndị a dị naanị na ndenye ọgwụ na maka ụmụ nwanyị nwere ọrịa ara ara, ewerela m steroid ndị anabolic dịka Dece, Sustanon, Hemogenin na Winstrol Enwetụbeghị m ihe ọ bụla.
March 17, 2017 na 18:46 am - Dezie
Gịnị bụ TPC?
March 23, 2017 na 17:56 am - Dezie
'Ọgwụgwọ Post-Cycle' Jorge. Ekwesiri ime ya mgbe obula i mejuputara okirikiri, ma obu ogologo oge ma obu obere, iji zere oke nchoputa nke ihe enwetara, na mgbakwunye na 'imezi' ihe ndi ozo na emeputa anabolics.
Mee 16, 2017 na 22:34 pm - Dezie
TPC (Iji Jikere Nri) ụmụ nwanyị, dị ka egwu, ọbụna na-ele anya dị ka Ngwucha Ugwu
June 20, 2017 na 11:31 pm - Dezie
Anọ m na-a tabletsụ dianabol mbadamba maka 35 ụbọchị, m 52 afọ.
Naanị m nwetara 5 kilos nke uka, ma enwetara m ọtụtụ ike karị ma enweghị m ihe ọ bụla na-adịghị mma.
June 29, 2017 na 13:49 pm - Dezie
ehihie ọma, amalitere m okirikiri na dianabol na m na-ewere ya kwa ụbọchị, ka mma idobe ya n'ụzọ ahụ ma ọ bụ tinye kwa ụbọchị?
September 20, 2017 na 21:23 am - Dezie
N'ehihie, ahụtụbeghị m steroid nke anabolic na ndụ m, mana m nwere mmasị na dianabol na azụrụ m ya, mana achọrọ m ịma etu m si eme tpc Achọrọ m ime ihe niile ziri ezi iji nweta uru ka mma ma debe ya ihe m ga - enweta na akwara, biko zitere m maka e-mail m gịnị bụ ngwaahịa na otu esi ewe ha mgbe m gachara okirikiri, abughi m onye mbido na bodybuilding m na - aga mgbatị maka 10 na ọkara afọ, a na m eche azịza gị daalụ.
Eprel 19, 2018 na 14: 52 pm - Dezie
Naanị ịchị ọchị na ọtụtụ ozi ịgha ụgha ,,, TPC (usoro ọgwụgwọ okirikiri) emechara mgbe izu iri na iri ruo izu iri na abụọ, mgbe ngwụcha ikpeazụ, oge dabere na ihe ị na-ewere, ma ọ bụ ịgbanye.
Julaị 10, 2018 na 21:24 am - Dezie
Ndewo, m nọ na-eche ma mmetụta niile nke ihe anyị na-etinye na nha anya ya na nsonaazụ ọgwụ? Zaanụ m biko.
Digital n'ọtụtụ: Olee otú Họrọ? Ahịa na elsdị
Anti-cellulite: Ọgwụgwụ nke Cellulite! Enweghị aghụghọ! Lee ka o si kwe omume!
Yoga: Ọ na-efufu ibu? Olee otú ime? Womenmụ nwanyị dị ime ọ ga - eme ya? Gaa ebe a!